Chiitiko cheApple chaApril 20 chave pamutemo | Ndinobva mac
Chiitiko cheApple chaApril 20 chave pamutemo
Mangwanani ano runyerekupe rwaonekwa kuti pamwe tichava neApple chiitiko musi waApril 20. Zvinoita sekunge iwe wakabvunza Siri yechiitiko chinotevera chekambani, ini ndaizokupa iro zuva. Pandakaziva, ndakaiyedza uye haina kuzoshanda.
Saka zvaive zvisina kunyatso kujeka kana yaive "yekunyepedzera", kana bhagidhi muApple's system. Panguva ino, tinogona kusimbisa kuti kambani yakazivisa zviri pamutemo kuti ichaita chiitiko chayo chinotevera 20 wemwedzi uno.
Zviri pamutemo izvozvi. Apple yakangosimbisa maminetsi mashoma apfuura kuti inotevera Chipiri, Kubvumbi 20 Na19 manheru nguva yeSpanish, tichava nemusangano mutsva wakasarudzika nevenguva dzose vekambani kuti vape zvinotevera zvinoburitswa.
Runyerekupe rwakapararira maawa mashoma apfuura apo vashandisi vakati wandei vakaona kuti pakubvunza Siri nezve inotevera Apple chiitiko, iye akapindura nezuva raApril 20. Nekukurumidza iko kukanganisa kwakagadziriswa neApple, asi tsuro yakanga yatosimudzwa.
Haisiyo nguva yekutanga kuti Siri atiudze nezve chiitiko chekambani isati yave pamutemo. Muna 2016 Siri akafungidzira zuva reiyo WWDC yegore iro, uye ikozvino zvaitika zvakare.
Izvozvi zvinoramba zvichizoonekwa kuti ivo vachatiunzira chii. Isu tinofungidzira kuti itsva iPad Pro, uye pamwe imwe Apple Apple Silicon modhi. Kana isu tatova neiyo mini Mac uye MacBooks, zvine musoro chinhu zvingave zvimwe IMac neM1 processor. Zvingave zvakanaka.
Jon Prosser ane chokwadi chekusvetuka achinongedzera kuti ivo vachazopawo zviroto zvavo AirTags. Asi zvichaitika kwaari senge nyaya yemhumhi. Hapana munhu anozvitenda, uye wham, Tim Cook anozoburitsa muhomwe yake. Kana kwete…
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Chiitiko cheApple chaApril 20 chave pamutemo
Iyo data yemamirioni mazana mashanu evashandisi veLinkedIn yakabiwa
Will Smith's Apple TV + Movie "Kusunungurwa" Inotsvaga Mamiriro Matsva